INkonzo yabaThengi kwiMidiya yoLuntu | Martech Zone
INkonzo yabaThengi kwiMidiya yoLuntu
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 21, 2012 Douglas Karr
Ekubandakanyeni amajelo eendaba ezentlalo, eyona nto iphambili kuthi kunye neenkampani esisebenza nazo kukuqinisekisa ukuba ishishini labo likulungele ngokupheleleyo ukubandakanya abanethemba kunye nabathengi kwi-intanethi. Ngelixa iinkampani zinokubona imithombo yeendaba zentlalo njengethuba elinokubakho lokuthengisa, abaqondi ukuba abantu abakwi-intanethi abayikhathalelanga injongo yabo… bakhathalela kuphela ukuba kukho ithuba lokuthetha nenkampani. Oku kuvula umnyango wokujongana nemiba yeenkonzo zabathengi emehlweni oluntu… kwaye iinkampani kufuneka ziqaphele imigibe namathuba.
le kwi-infographic Amagqabantshintshi abonisa izibalo ezinyanzelayo, umzekelo, abathengi abazibandakanya neenkampani ngeendaba zosasazo bachitha iipesenti ezingama-20% ukuya kwezingama-40% kwezi nkampani. Ke uyisebenzisa njani imithombo yeendaba zentlalo xa unxibelelana neemveliso zeshishini okanye nabathengi bakho?
Lungisa umba umthengi onawo kwimithombo yeendaba zentlalo kwaye uya kuyifumana yenye yezona ndlela zintengiso zibalaseleyo okhe wasebenza kuzo. Bayeke baxhonywe, kwaye uyakufumanisa ukuba okuchaseneyo kuyinyani.
tags: Inkonzo eyenzelweinkonzoImidiya yokuncokola
Isicwangciso seNtengiso seLers kunye nabaphumeleleyo ngo-2012